Ny Herinandro Tany Bahrain (5) · Global Voices teny Malagasy
Ny Herinandro Tany Bahrain (5)
Voadika ny 31 Desambra 2018 10:06 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 10 Aprily 2006)
Lohateny lehibe tamin'ity herinandro ity manerana izao tontolo izao i Bahrain taorian'ny nahafatesan'ireo mpanao fety miisa 58 nandritra ny filentehan'ny sambo nentim-paharazana iray, ivelan'ny Fanjakana tamin'ny Alakamisy (31 Martsa 2006).
Haingana dia naneho hevtra mikasika ilay tranga ireo blaogera, ora vitsivitsy taorian'ilay loza, ary nanohy ny nanavao ny blaoginy niaraka tamin'ny fivoaran'ny toedraharaha.
Nandrakotra ilay loza nitranga tao anatin'ny lahatsoratra fito i Strav, miaraka amin'ny fanavaozana farany manasongadina rohy iray mankany amin'ny tranonkalan'i Ashish Gorde, blaogera iray monina ao Bahrain, izay nodimandry tao anatin'ilay loza ny namany.
Tena mbola mahay mampiasa teny foana, maneho hevitra mikasika ny anton'ilay loza i Manama Republic, mampiseho ny fitohizan'ny fitongilanana ao Bahrain, na dia taorian'ny fahafatesan'ireo olona 58 tamin'ity loza ity aza.
”Tranga somary mampiahiahy, ireo zavatra voatanisa ho toy ny mety ho antony: mavesatra loatra, fahasimban'ny firafitry ny sambo, fitongilanana ary kapiteny tsy mahay, ireo no tena miteraka ity fahatsapana milentika ity hoe tsy manana vintana tsara handehana haingana mihitsy ny firenena raha oharina amin'ilay sambo rendrika. (Efa miresaka mikasika ny fitongilanana ihany, voamarikareo ve fa avy amin'ireo ankolafy tery saina avokoa ireo nisolo tena ny fahefan'ny Fanjakana nandritra ilay tafa ho an'ny gazety?)””, hoy izy manoratra.
Manontany tena ihany koa izy amin'ny fomba nanasan'ny governemanta ny tanany tamin'ilay loza ary ny antony tsy nisian'ny olona nametraka fialàna, na iray aza, tamin'ireo teo amin'ny fitondrana, taorian'ilay loza.
”Mety misy fepetra fiarovana na tsia. Mety ho manana fahazoandalala mandeha na tsia ilay sambo. Mety nahafeno fepetra, na niharan'ny tsindry, na meloka amin'izany ilay kapiteny na tsia. Zavatra iray no azo antoka, avelan'ny fanjakàna ianao hampiasa ny tolotra rehetra izay mety hampidi-doza anao, toy ireo mpamatsy rindrambaiko tianao indrindra ihany. Raha mety aminao izany, tsara izany. Raha tsia, dia mahereza izany. Na kely na betsaka, tsy mandray andraikitra amin'izany ny Fanjakana. Tsy misy tokony hiala noho izany ny mpiasam-panjakana, satria tsy misy tsy fanatontosana andraikitra ao. Mazava ho azy fa any an-kafa ny andraikitr'ireo mpiasam-panjakana, na ambony izy na ambany”, hoy izy manamarika.
Mitatitra mikasika ilay zava-nitranga ihany koa i Mahmood Al Yousif, mitaky fanadihadiana mikasika ny antony ary mba hitondràna ireo tomponandraikitra amin'izany hiatrika fitsarana.
“(I)…”Tena manantena mafy aho fa haka lalàna entitra kokoa mba hiarovana ireo mpitsidika sy mponina ireo sampandraharaham-panjakana misahana ny indostrian'ny fizahantany, fandriampahalemana sy fiarovana, ary hanao fanadihadiana azo atokisana sy mangarahara momba ity loza ity mba hahafantarana mikasika izany ary hahafahana mamonjy aina hafa amin'ny hoavy.
‘Tokony ho voasazy ny olona tomponandraikitra mivantana amin'ny tsy fanarahana ny lalàna mikasika ny fiarovana ary tokony ho hadihadian'izy ireo izao dieny izao ity orinasa ity mikasika ny fiasany, fanofanany ary ny fanamarinam-pahaizana ny mpiasa ao aminy sy ny fepetra fiarovany’, hoy izy manoratra.
Mandritra izany fotoana izany, niraikitra teo anoloan'ny fahitalaviny mba hanaraka vaovao, izay azo antoka fa nahatohina ny fon'ireo rehetra naheno momba izany, ireo blaogera any am-pitandranomasina, toa an'i Dr Haitham any Alaska.
Lavitra an'i Bahrain, ilay Governemanta Hamas vaovao tandrametaka ao Palestina dia mahazo fanakianana avy amin'i Haitham Sabbah, izay tena tezitra amin'ny toetra tsy misy fandeferana noraisiny nanoloana ny zavatra tsy asian'ireo Palestiniana liberaly olana na ny kely aza – ireo mpampandihy kibo .
”Aleo ianareo ilazako zavatra. Raha toa ka tsy hahomby i Hamas (ary hitranga izany) ary ho voadaka hivoaka ny biraony, izao no zavatra hitranga. Ny havendranany sy ny fanasaziana anatiny ireo Palestiniana efa tena leo be. Vondrona Arabo liberaly sy tsy miandany aminà finoana ny Palestiniana, ary aorian'izany rehetra izany, mbola mijanona ho toy izany ny ankamaroany,” hoy izy manoratra.
Raha ny mikasika izao tontolo izao, manohy miady amin'ny efitrano fonenana vaovao iray izay nifindrany taorian'ny nialàny sasatra tany Bahrain i Hasan, Bahraini iray mianatra any Japana. Toy ilay mpanamboatra trano, avy tany Kanada izahay no nividy ny efitrano fonenanay, manana vahaolana haingana ho an'ny zavatra rehetra mety hitranga ilay vehivavy Japoney tompontrano.
”Manana ny Tompontrano MILAY indrindra manerana ny tany aho, izay mahafantatra TSARA ny fomba hamandrihana ahy amin'ny zavatra rehetra,” hoy i Hasan manoratra.
‘Nifindra tao amin'ilay efitrano fonenana aho roa andro lasa izay, ary vao haingana taorian'izany, tsy nandeha intsony ny ofuro-ako (karazana tavibe fandroana) ! Koa niantso olona vitsivitsy hanamboatra izany aho, fa vao tonga izy ireo dia noroahany, tamin'ny filazàna fa misy nàmany hijery izany. Avy eo, nojerena izany ka nilazan-dry zareo izy fa tsy afaka ny hamboarina intsony ilay izy (efa somary antitra ihany ilay izy). Noho izany, niverina taty amiko izy, nifona tamin'ny fampitoniana ahy tamin'ny alalan'ny SAKAFO (izay mandaitra foana amin'ny bandy).”
* Ireo voasoratra anarana irery ihany no afaka miditra ao amin'ny tranonkalan'i Ashish Gorde.